Wa and Wi | ကိုသင္ကာ . . . . Ko Thinker
← My Collection of Dic; Encyclo; & Ref; Books 4
ထိုင္းေရာက္ ပုသိမ္ထီး →
Wa and Wi
(Xcitefun fantasy and illusion art work-1)
ဘဝဟာ လနဲ့ တူတယ်
သူသည် ငုတ်တုတ် အရှိတရား
ငါတို့ ရင်ဖွင့်ရဲခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး
မင်း ထန်းသီးဖြစ်တဲ့အခါ အော်မယ်
ကျီး ဖြစ်တဲ့အခါ ဆော်မယ်
လောကဟာ ရေးထားတဲ့ ဝတ္ထု တပုဒ်မဟုတ်ဘူး
အေး … ငါလား
အသက်လည်း ၃၀ ကျော်သွားတယ် …။
ငါတယောက်တည်းတော့ မဟုတ်ဘူးရယ် …။
၈. ၈. ၂၀၁၁